China Electronic Brinell Kuoma Tester Wholesale HBE-3000A fekitari uye vagadziri | KAIRDA
Yemagetsi Brinell Kuoma Tester Wholesale HBE-3000A
Elektroniki Brinell Hardness Tester Wholesale HBE-3000A inotora redunhu mhando sensor yakawedzerwa neyekutonga sisitimu inoshanda kuyera kuomarara kukosha kwehombe zviyo simbi zvigadzirwa, nonferrous simbi uye alloy, dzakasiyana-siyana hasha simbi, kuomesa uye tempering simbi, kunyanya yesoft nyoro senge yakachena aluminium. , tin, nezvimwewo. Tsanangudzo Model HBE-3000A Yese Yekuyedza simba 612.5N, 980N, 1225N, 1837.5N, 2450N, 4900N, 7350N, 9800N, 14700N, 29400N Hardness Test Range 8 - 650 HBW (Hardmetals simbi bhora) Amp ...
Yemagetsi Brinell Kuoma Tester Wholesale HBE-3000A adopts redunhu mhando Switch akawedzera pamwe kudzora maitiro anoshandiswa kuyera kuoma ukoshi guru zviyo simbi zvinhu, nonferrous simbi uye chiwanikwa, siyana dzinopfavisa simbi, kuomesa uye tempering simbi, zvikuru simbi nyoro akadai wakachena aruminiyamu, gaba, etc.
Yese Yekuyedza simba 612.5N, 980N, 1225N, 1837.5N,
Kupakeka Mukurongedza Chinyorwa
.52.5, φ5, φ10mm Simbi bhora indenters 1
Kuedza matafura (mahombe, madiki "V") 1
Kuoma Tester Chikamu
• Kuoma tester zvikamu
• Leeb Kuoma Tester
• Brinell kuoma Tester
• Rockwell kuoma Tester
• Vickers kuoma Tester
• Webster yekuoma tester
Kuoma Tester Kuchengeta
Pamusoro pekuchengetedzwa kwakasiyana mukushandisa kwema durometer akasiyana siyana, vanoedza kuomarara, pane imwe nyaya yakajairika inofanirwa kucherechedzwa, yakanyorwa seinotevera:
1. Iko kuomarara zvikanganiso: chimwe chekukanganisa kunokonzerwa nekushomeka uye kufamba kwekuyera specimen; Zvimwe zvinokonzerwa neukukutu paramende kunze kwetsamba yakatarwa. Kune yekukanganisa kwechipiri, chiyero chakajairika chinodiwa kuti chiyananise durometer isati yayerwa. Zvekururamisa mhedzisiro yeRockwell hardness tester, mutsauko uri mukati me ± 1.Kana mutsauko uri mukati me ± 2, iyo yakatarwa kukosha inogona kuwanikwa.Kana mutsauko uri kunze kwehurefu hwe ± 2, iyo yekuomesa tester inofanira kugadziriswa, kugadziriswa kana inotsiviwa neimwe nzira yekuyedza bvunzo.
Imwe neimwe rockwell kuomesa sikero ine inoshanda yekushandisa renji uye inofanirwa kusarudzwa nemazvo zvinoenderana nemirau. Semuenzaniso, kana kuomarara kwakakwira kupfuura HRB100, HRC chikero chinofanirwa kushandiswa kuyedza; Kana kuomarara kuri kwakaderera pane HRC20, HRB chikero chinofanirwa kushandiswa pakuyedza. Nekuti pamusoro peiyo yakatarwa bvunzo renji, kuomarara kwemamita kunyatso uye kunzwisisika kwakashata, kukosha kweukukutu hakuna kururama, hakuna kukodzera kushandiswa. Dzimwe nzira dzekuyedza dzekuyedza dzine zviyero zvakaenzana.Standard block for calibrating durometers haigone kushandiswa pamativi ese ari maviri nekuti kuomarara kwerutivi rwehuremu uye rwekumashure kunogona kunge kusiri kwakafanana. Kazhinji, standard block ichave inoshanda mukati megore rimwe kubva pazuva rekuyerwa.
2. mukutsiva kwemusoro kana chivharo, teerera kune zvinosangana zvikamu kuti upukute zvakachena.Mushure mekutsiva, iyo simbi sampuro inofanirwa kuyedzwa kakati wandei nehumwe kuomarara kudzamara kukosha kwekuomarara kwakafanana kwenguva mbiri dzakateedzana. Chinangwa ndechekugadzira musoro wekumanikidza kana chivharo uye chikamu chekubata chemuchina wekuyedza, bata zvakanaka, kuti zvisakanganisa iko kweye bvunzo mhedzisiro.
3. Mushure mekuoma kwekuyedza kwakagadziriswa, iyo yekutanga bvunzo haina kushandiswa kana kuoma kuyerwa.Nekuda kwekutya sampuro uye anvil kuonana hakuna kunaka, chiyero chakayerwa hachina chokwadi.Kushure kwekutanga bvunzo rapera uye kuomarara tester iri mune yakajairika mashandiro, muyenzaniso uchaedzwa zviri pamutemo uye kuomarara kukosha kuyerwa kuchanyorwa.
4. Kana iyo specimen ichibvumidzwa, dzinenge nhatu dzakaomarara tsika dzinowanzosarudzwa kubva kumativi akasiyana kuti zviongororwe, uye huwandu hwepakati hunotorwa sehuremu hwekukosha kwesampuli.
5. Kune iwo maeximens ane akaomarara maumbirwo, padhi inoenderana chimiro inofanirwa kugamuchirwa uye kugadziriswa isati yaedzwa.Yakatenderera specimen inowanzoedzwa muV-yakaita groove.
6. Usati warodha, tarisa kana iyo yekudhonza mubato yakaiswa panzvimbo yekuburitsa. Panguva yekukwikwidza, chiito chinofanira kuve chakareruka uye chakadzikama, kwete chakanyanya kuoma Mushure mekutakudza, mubato wekutakudza unofanirwa kuiswa panzvimbo yekuburitsa, kuti udzivise deformation yepurasitiki inogona kukanganisa iko kuyerwa nekuda kwechiridzwa chiri pasi pemutoro nguva yakareba.
Pashure: Yakananga Kuverenga Brinell Kuoma Tester HBS-3000
Zvadaro: Dhijitari Yakadzika Mutoro Brinell KuomaTester HBS-62.5